Vavaka hanoherana ny fahitana sy ny henatra ao anaty nofy | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka hanoherana ny fahitana sy ny henatra ao anaty nofinofy
Ezekiela 12:28 Koa lazao aminy hoe: Izao no lazain'i Jehovah Tompo; Tsy hisy haingo ny teniko, fa ny teny nolazaiko no hatao, hoy Jehovah Tompo.
Ny nofy dia ara-paminaniana eo amin'ny natiora, mitaky fahatakarana ara-panahy avy amin'ny Fanahy masina mba hahafantarantsika ny nofy, ary mila fahatakarana ny nofinao ny fitakiana ireo fitahiana avy aminy na ny famadihana ireo ozona aminy. Androany dia hijery vavaka isika raha tsy mahita sokatra na sifotra amin'ny nofy. Betsaka ny olona no mety ho gaga amin'ity lohahevitra ity, ny sasany mety hanontany tena raha toa ka olana lehibe ny mahita zavaboary toy izany amin'ny nofy. Ny tontolon'ny nofy dia tontolo tandindona, tontolo iray misy dikany ny zava-drehetra. Olona maro izay manonofy sokatra sy sifotra ary tsy mahalala ny dikan'izany dia mijaly noho ny tsy misy dikany. Betsaka amin'izy ireo no mandalo fotoan-tsarotra sy fahasosorana amin'ny fiainana ary tsy fantatr'izy ireo fa misy ny loza noho ny nofy. Fa anio kosa isika dia handinika ny dikan'ny fahitana sokatra na sifotra ao anaty nofy ary inona no hatao amin'izany.
Ny dikan'ny hoe mahita ny sokatra na zana-kena ao amin'ny nofy
Manana ny zavatra iraisana iray ny sokay ary sotro dia samy miadana izy ireo. Rehefa mahita ny iray amin'ireo andinin-teny ireo amin'ny nofinao ianao dia midika izany fa mijaly amin'ny fahatemorana ianao. fahatarana dia zavatra ratsy tokoa, mety hiteraka fahasosorana, sy fanemorana. Tsy misy mahakivy olona tahaka ny fahatarana, ny zava-drehetra eo amin'ny fiainanao mihetsika amin'ny hetsika miadana, ity dia fanjakana tena mahatsiravina hahitanao ny tenanao. Ny fahatarana dia mety hiaina amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao, ohatra, ny asanao, ny orinasanao, ny fikarakarana, ny fanambadiana, ny fiterahana, ary ny valim-bavaka aza. Mba hialana amin'ny fahatarana, dia tsy maintsy mandany vavaka ianao. Ny vaovao tsara dia hoe izay tsy hitanao amin'ny nofinofinao dia tsy farany, raha tianao io dia azonao atao ny mitaky izany, raha tsy tianao izany dia afaka mandà ianao, manohitra na manafoana azy. Io vavaka atao amin'ny tsy mahita ny sokatra na ny bevohoka ao amin'ny nofy dia voafantina am-pitandremana ho anao mba handresena ny fanemorana ny fanemorana ny fiainanao. Rehefa mampiditra azy ireo amin'ny finoana anio ianao dia hahazo ny hafainganam-pandehanan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Ny olana rehetra izay nentiko teo amin'ny fiainako tamin'ny alàlan'ny fiarahako tamin'ny fanahin'ny sokatra na ny sifotra dia maty ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Nofoako ny hetsika sy ny herin'ny fanahy moka amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Nofoako ny fanekena sy ny fanozonana ny fanahy masira teo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ny vokatry ny fanahin'ny setroka teo amin'ny fiainako dia hohamaizina amin'ny ran'i Jesosy.
12. Tompo ô, avelao ny tsy azo atao rehetra hanomboka ho tonga mora tanterahina amiko isaky ny sampana amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Tompo ô, alao amin'ny toerana itiavako aho.
14. Tompo ô, manaova lalana ho ahy tsy misy làlana.
15. Ry Tompo ô, omeo ahy ny fahefana hotanterahina, mahomby sy mahomby amin'ny fiainana, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Tompo ô, tapaho aho isaky ny departemanta ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Tompo ô, avereno aho hahatontosa fahagagana mampidina eo amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Tompo ô, avereno aho mba hialana amin'ny sakana rehetra amin'ny làko mankany amin'ny fandrosoana amin'ny fiainana, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Tompo ô, aoreno aho amin'ny fahamarinana, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary ny fahatokiana.
20. Ry Tompo, ampio ny asako, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Ry Tompo, ampio ny asako, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Ry Tompo, ampio ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Tompo ô, amporisiho sy arovy ny aiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Izaho dia mandà ny drafitra sy fandaharam-pon'ny fahavalo ho an'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Nolaviko ny andraikitra sy ny fitaovam-piadiana fahavalo hamono ny aiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Ny fitaovam-piadiana sy ny teti-dratsy rehetra hanohitra ahy dia tsy mahomby tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Izaho dia mandà ny fahafatesana aloha loatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Izaho dia mandà ny fandringanana tampoka amin'ny alina, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Izaho dia mandà ny hain-dàlana amin'ny diako miaraka amin'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Manda ny trosa ara-bola amin'ny anaran'i Jesosy aho.
31. Laviko ny tsy fahampiana sy ny mosary amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
32. Laviko ny lozam-pifamoivoizana ara-batana sy ara-panahy amin'ny fidirako sy hivoahako, amin'ny anaran'i Jesosy.
33. Izaho dia mandà ny aretina amin'ny fanahiko, ny fanahiko ary ny vatako, amin'ny anaran'i Jesosy.
34: Izaho dia manohitra ny asa ratsy rehetra eo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
35. Nandresy ny fisafotofotoana tsy misy hery aho ary ny fanafihana rehetra ataon'ny fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Mandidy ny fisaraham-panambadiana ara-panahy eo amiko sy ny hery maizina rehetra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Ny poizina sy ny zana-tsipiky ny fahavalo rehetra, ataovy tsy miandany amin'ny anaran'i Jesosy.
38. Izaho dia nanapaka ny ziogan'ny tsy vokatra rehetra tamin'ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
39. Foanana ny drafitra sy mariky ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Ry Jesosy Tompoko ô, esory ny fifandraisana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaky ny ady mba hanafoanana ny mpanohitra
Next lahatsoratraTorohevitra ho an'ny fahagagana sy famantarana ary fahagagana amin'ny 2020 ny vavaka
Vavaka amin-kery ho an'ny fanasitranana ny homamiadana
40 Baiboly momba ny fahendrena kjv